Mandeha nomerika androany ny sarimihetsika 'Misbehaviour'
Home » Lahatsoratra farany farany » culinary » Mandeha nomerika androany ny sarimihetsika 'Misbehaviour'
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Grenada Breaking News • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Aprily 16, 2020
Mandeha nomerika ny sarimihetsika misbeh behavior 'androany
Iray volana monja taorian'ny nahazoan'ny premiere ny kintana namela any London, efa misy amin'ny horonan-tsary nomerika amin'ny sehatra fangatahana izao ilay sarimihetsika. Pure Grenada, ny Spice of the Caribbean dia nanambara ny sarimihetsika tamin'ny fotoana nanoratany fotoana voafaritra teo amin'ny tantara: ny satro-boninahitry ny vehivavy voalohany miloko amin'ny maha Miss World.
Nanatrika ny première tany Londres tamin'ny 9 martsa dia i Charge d'Affaires ho an'ny The Grenada High Commission London, Samuel Sandy; Dr Johnson Beharry VC COG sy Ramatoa Mallissa Beharry; Mary McQueen sy Deborah McQueen, renim-pianakaviana mpanakanto, talen-tsoratra sy mpanoratra, Steve McQueen; Suzanne Gaywood OBE, mpamolavola fampirantiana Grenada nahazo medaly volamena tany amin'ny RHS Chelsea Flower Show niaraka tamin'ireo vahiny nasaina manokana.
Pathe Film Studios dia nanambara fa satria ny famoahana sinema UK an'ny MISBEHAVIOR dia notapahin'i Covid-19 krizy (miaraka amin'ny sarimihetsika mihidy 4 andro monja aorian'ny famoahana ilay horonantsary), ny sarimihetsika dia natokana hojerena ao an-trano 3 volana mialoha ny fandaharam-potoana. Hita amin'ny sehatra rehetra izy io (ao anatin'izany ny Amazon Prime, Sky Store ary iTunes) mandritra ny fotoana manokana.
Jennifer Hosten, teraka tany Grenada tamin'ny 1947, dia mpanamory fiaramanidina ho an'ny BWIA (Caribbean Airlines ankehitriny) rehefa naka fialan-tsasatra izy mba hifaninana amin'ny Miss World. Ny fifaninanana hatsaran-tarehy no seho fahita fahita indrindra tamin'ny planeta fahita indrindra teto an-tany ary tamin'ny taona 1970 dia natolotry ny angano hatsikana amerikana Bob Hope. Tsy tokony ho avo kokoa ny tsatoka ary rehefa notapahan'ny fidiran'ny hetsika famotsoran-keloka ho an'ny vehivavy ny fampitana mivantana dia nahasarika ny mpihaino manerantany. Avy eo, satria Miss Grenada - ilay Nutmeg Princess miakanjo tena - dia nosatrohina ho vehivavy voalohany miloko Miss World, rava ny fivoriambe.
MISBEHAVIOR, notarihin'ny mpandresy BAFTA Philippa Lowthorpe (Tovovavy telo), kintana Gugu Mbatha-Raw toy ny Grenadian, Jennifer Hosten - vehivavy voaloko voalohany nomena satro-boninahitra Miss World, Keira Knightley ho mpikambana ao amin'ny New Liberation Movement an'ny vehivavy, ary mpilalao kintana rehetra ao anatin'izany Jessie Buckley, Greg Kinnear Lesley Manville, Keeley Hawes, Rhys Ifans ary Phyllis Logan.
Ny Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Grenada Tourism Authority (GTA) Patricia Maher dia nilaza fa: "Ny fitondran-tena tsy mendrika dia maneho toko iray amin'ny tantaran'i Jennifer izay maneho ny fiainam-piainany raha nanampy azy hametraka an'i Grenada amin'ny sari-tany dimam-polo taona lasa izay. Manasa anao aho mba hanokana fotoana hijerena an'ity tantara mahatalanjona ity raha ao an-trano ianao ary miadana soa aman-tsara. Manantena ny fampisehoana an'ity horonantsary ity any Grenada izahay rehefa afaka mivory amin'ny fiaraha-monina indray. "
Ilay tantara an-tsary hatsikana izay niresaka momba an'i Grenada, dia nifarana tamin'ny fanomezam-boninahitra mendrika avy amin'ny Mightly Sparrow ho an'i 'Cousin Jennifer', Miss World 1970.
American Airlines raha oharina amin'ny Jet Blue: Executive ...
500,000 ny asan'ny hotely amerikana tsy hiverina intsony amin'ny faran'ny ...